Kaamirada Vivo X50 Pro waa gimbal dhab ah sababtan awgeed. Androidsis
Tani waa sida xasilinta kamaradda cajiibka ah ee Vivo X50 Pro u shaqeyso
Nerea Pereira | | Shiinaha Shiinaha
Waa xaqiiqo muuqata in qaybta sawir qaadista ee boosteejooyinkeennu ay yihiin cunsur sii kordheysa oo muhiim ah. Iyo Kaamirada Vivo X50 Pro waa tusaale cusub oo ka mid ah. Soo-saaraha ayaa muddo dheer sii kululaynayay bilowga calankeeda soo socota. Jilayaasheeda ugu weyn? Kaamirada dambe waa gimbal dhameystiran.
Haa, waxaan ka hadlaynaa nidaamyadaas xasilinta si aan awood ugu yeelanno inaan sawirro ku qabanno ama aan ku duubno fiidiyowyo leh tayo wanaagsan. Oo, waxaan horeyba u rajeyneynaa taas, markaad aragto sida ay u shaqeyso kaamirada Vivo X50 Pro ku yaal dhabarka, waxaad u maleyneysaa inaad dhalanteed u qaadaneyso.
Kaamirada Vivo X50 Pro waa gimbal
Runtu waxay tahay inaan fiidiyowyo badan ku duubeyno moobilkeena, maaddaama terminaal kasta oo dhexdhexaad ah uu gaaro natiijooyin wanaagsan. Kadibna waxaa jira kiiska Vivo, kaas oo qaadi doona boodbood tayo leh si loo calaameeyo kahor iyo kadibba warshadaha. Sababta? Waxay isku darsadeen nidaam la raadinayo kan Bixiyaasha Dhaqan ahaan
Sidan oo kale, soo saaruhu wuxuu rabay inuu xabadka ka saaro Vivo X50 Pro, oo ah terminal laga yaabo inuu suuqa ku dhaco Juun 1, oo leh nidaam xasilineed oo kaa yaabin doona. Haa, waxay u noqon kartaa halbeeg ay soosaarayaasha waaweyni bilaabaan hirgalinta farsamadan.
Sida aad ku arki karto fiidiyowga hogaaminaya xariiqyadan, kaamiradda Vivo X50 Pro waxay leedahay nidaam xasilineed oo guriyaheeda ah, si loogu oggolaado muraayadaha inay iskaga kala wareegaan laba jiho. Tan, xitaa haddii aan wadno garaac xun leenahay, faasaska ayaa isku beddesha si ay xasillooni u yeeshaan.
Waxay leedahay mudnaan gaar ah tan iyo markii nidaamku ku duugan yahay terminal leh a dhumucdiisuna waa 4.5 mm oo keliya. Natiijada? Marka loo eego xogta astaanta, hagaajinta xasilinta boqolkiiba 300 ayaa la gaadhay marka la barbar dhigo nidaamyada hadda jira. Intaa waxaa dheer, Vivo waxay sheeganeysaa in kamaradda X50 Pro ay sidoo kale hagaajin doonto xasaasiga iftiinka u dhexeeya 39 iyo 220 boqolkiiba, si loogu gaaro sawirro fadeexo leh deegaan kasta.
Waa inaan sugnaa sugitaanka rasmiga ah ee terminalka si aan u aragno waxa soo saaraha Aasiya nagula yaabay. Laakiin, way cadahay in kamaradda Vivo X50 Pro ay noqon doonto soosaaraha weyn ee qalab tilmaamaya inuu aad u sarreeyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Shiinaha Shiinaha » Tani waa sida xasilinta kamaradda cajiibka ah ee Vivo X50 Pro u shaqeyso
WhatsApp wuxuu horeyba u oggol yahay in lagu daro xiriirada lambarrada QR ee qaabka beta ee Android
[VIDEO] Sida loogu xiro Galaxy Note10 + iyo Windows 10 PC